आज क्यानडामा आम चुनाव, को होला प्रधानमन्त्री ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
आज क्यानडामा आम चुनाव, को होला प्रधानमन्त्री ?
आज क्यानडेयिन मतदाताहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन टु्रडोलाई नै दोश्रो कार्यकालका लागि अनुमोदन गर्ने वा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा निर्णय गर्दैछन् । क्यानडामा प्रधानमन्त्री दुईकार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदै आएको लामो इतिहास छ तर पछिल्ला केही गलत कदम र स्क्याण्डलका कारण जस्टिन टु्रडोले अहिले एन्ड्रयु शीयरसँग कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहनु परेको छ । टु्रडो ४७ बर्षका छन् भने शीयर ४० बर्षका छन् ।
आजको चुनावमा लिबरलका तर्फबाट जस्टिन टु्रडो र कन्जरभेटिभका तर्फबाट एन्ड्रयु शीयर चुनावी मैदानमा रहेका छन् । मतदाताहरुले संसदका ३३८ सिटमा आज मतदान गर्दैछन् । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि र सरकार गठन गर्नका लागि कुनै पनि दलले १७० सिट ल्याउन जरुरी छ ।
टु्रडोले क्यानडामा डाइभर्सिटीका पक्षमा काम गर्दै आएका छन् भने शरणार्थीहरुलाई शरण प्रदान गर्दै आएका छन् । कार्बनमा राष्ट्रब्यापी रुपमा मूल्य लागु गर्नुका साथै उनले गाँजालाई बैध बनाएका छन् । वेरोजगारी दर घटाएर दशकमै सबैभन्दा कम बनाएका छन् ।
एन्ड्रयु शीयर भने रुढीबादी नेताका रुपमा परिचित छन् । गर्भपतनबारेको उनको विरोध र समलिंगी विवाहलाई समर्थन गर्नेबारेको अस्पष्ट धारणाका कारण उनी विरोधीहरुको निशानामा पर्दै आएका छन् । उनले पाँचबर्षभित्र बजेट सन्तुलन मिलाउने र यी दुबै विषयलाई बहसमा नल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरुबाहेक जगमित सिंह, एलिजाबेथ मे, म्याक्सीम बर्नर लगायतका केही नेताहरु पनि चुनावी मैदानमा छन् । तर उनीहरुले चुनाव जित्ने सम्भावना भने निकै न्यून रहेको छ ।
क्यानेडियनहरुले हाउस अफ कमन्समा प्रतिनिधित्व गर्ने ३३८ जना सदस्यहरुलाई निर्वाचित गर्नेछन् । क्यानेडियनहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्नेछैनन् । हाउसअफ कमन्समा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनेछ । संसदमा बहुमत ल्याउने पार्टीले नै प्रधानमन्त्री र सरकार गठन गर्छन् ।